वन्यजन्तुको आवत जावतका लागि यस्तो बन्दैछ ‘ओभरहेड ब्रिज’ - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
रमेश तिमलसिना - August 13, 2020 0
युवाको मानसिक स्वास्थ्यबारे छलफल निरन्तर
राजधानी समाचारदाता - August 13, 2020 0
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल र साइकडेक्स फाउन्डेसनले साताव्यापी युवाको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको...
दीप्क ओली - August 13, 2020 0
कोरोना संक्रमणबाट धनुषामा थप एक महिलाको मृत्यु
सुजीतकुमार झा - August 13, 2020 0
जनकपुरधाम । कोरोना संक्रमणबाट धनुषामा थप एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ । धरानस्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराइरहेकी ती महिलाको उपचारको क्रममा...
रासस - August 13, 2020 0
रुपन्देही । बुटवल उपमहानगर क्षेत्रभित्र आजदेखि बन्दाबन्दी गरिने भएको छ । बुटवल उपमहानगरको बैठकले आगामी भदौ ५ गतेसम्म पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो...
ओली–दाहाल छलफल समाधान उन्मुख
सुभाष साह - August 14, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपामा देखिँदै आएको संकट पाँच दिनभित्रै समाधान हुने घोषणा गरेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल...
विधि र पद्धति मिच्दै गए संकट अझै गहिरिन्छ: नेता नेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि, पद्धति र निष्ठाका आधारमा सञ्चालन गरिए अहिले देखिएका सबै...
सडकमा क्रस गरेर अकासे पानी र ढल
टेनिस रोका - August 14, 2020 0
काठमाडौं । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिका–६ मा सडकमाथि क्रस गरेर पानी र ढल बग्ने बनाएपछि सडकमै डुबान भइरहेको छ । वर्षाको पानी बगेर सडक भत्किएपछि...
राजधानी समाचारदाता - August 14, 2020 0
काठमाडौं । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणबीच पनि सरकारका विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका सहसचिव र उपसचिवमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने संकेत देखिएको छ । संघीय...
स्वचालित पेसी व्यवस्थापन अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वचालित प्रविधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वको समितिमा न्यायाधीशहरू...
रोटरी क्लब अफ काठमाडौंद्वारा प्रसूतिगृहमा कोरोना परीक्षणका निम्ती पीसीआर ल्याब निर्माण
काठमाडौं । परोपकांर प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीका निम्ती रोटरी क्लब अफ काठमाडौंले कोरोना परीक्षणका निम्ती पीसीआर ल्याब निर्माण गरेको...
महेश्वर गौतम - August 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीतर्फका गरी बुधबारसम्म ६ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सुरक्षा अंगमा धमाधम...
एजेन्सी - August 13, 2020 0
लन्डन । फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) युएफा च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । उसले इटालीको एटलान्टालाई पराजित गरेर २५ वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको...
राखेपमा खेलाडीको स्वाब संकलन
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं मेल्भिन जोन्सको पहलमा तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को आयोजनामा बुधबार ब्याडमिन्टन खेलाडीसहित अन्य खेलका खेलाडी, पदाधिकारी र कर्मचारीको...
विसंगतिविरुद्घ समाज गोलबद्घ हुन जरुरी
डा. देवीप्रसाद आचार्य - August 13, 2020 0
जसरी एउटा गाडी गुडाउनका लागि त्यसको इन्जिन, पार्ट पुर्जा, इन्धन र हाक्ने ड्राइभर चाहिन्छ, त्यस्तै देशमा सुशासन, दण्डहीनता, विकास र समृद्घिका लागि सचेतजनता र...
राजेन्द्र अर्याल - August 13, 2020 0
करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरी सरकार सञ्चान गरिरहेको नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म चासो र बहसको विषय बनिरहेको छ । त्यो पनि...
हिन्दू नारी र तीज पर्व
कृष्णराज ढकाल - August 13, 2020 0
तीजको लहर आयो बरी लै: तीज पर्व हिन्दू नारीले मनाउने प्रमुख पर्वको रूपमा विकास हुँदै आइरहेको छ । व्गितका वर्षमा झैं यस वर्षको तीज...
यूएईको शारजाहमा दुई नेपालीको हत्या
राजधानी संवाददाता - August 13, 2020 0
युएइ । युनाइटेड अरब इमिरेटस (यूएई) को शारजाह सहरमा दुई नेपाली युवाको हत्या भएको छ । उनीहरु को हुन् भनेर परिचय खुलाइएको छैन ।...
Home अर्थ वन्यजन्तुको आवत जावतका लागि यस्तो बन्दैछ ‘ओभरहेड ब्रिज’
वन्यजन्तुको आवत जावतका लागि यस्तो बन्दैछ ‘ओभरहेड ब्रिज’
बर्दिया । बर्दियाको खाता करिडोर क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी सडक खण्डमा वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि ओभरहेड ब्रिज बन्ने भएको छ । राजमार्गमा वन्यजन्तुको आवागमनका लागि ओभरहेड ब्रिज बन्न लागेको यो नेपालको पहिलो योजना हो । प्रदेश नं ५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको आर्थिक सहयोगमा यो योजनाको डिपिआर तयार भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । गौमुखि इन्जिनियरिङ्ग सर्भिस प्रालि ललितपुरले यसको डिपिआर तयार गरेको हो ।
खाता करिडोर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बन्ने ओभरहेड ब्रिज ४५ मिटर चौडाइ हुने योजनामा उल्लेख छ । यो योजना निमार्णका लागि करिव ९ करोड रुपैँया लागत लाग्ने बताइएको छ । योजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि निमार्ण कार्य सुरु हुने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लले बताए । वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्रदेश नं ५ को यो एकदमै नविनतम योजना रहेको बताइएको छ ।
वन्यजन्तुलाई पुलको अनुभव नहुने गरि यसको संरचना तयार पारिने बताइएको छ । पुलको माथि रुख,विरुवा तथा झाडीहरु रोपिने छ । जसले गर्दा वन्यजन्तुले जंगलमै हिडेको महशुस गर्ने छन्
खाता करिडोर क्षेत्र मधुवन नगरपालिकामा पर्दछ । हुलाकी सडकको झण्डै २ किलोमिटर क्षेत्र खाता करिडोरमा पर्छ । जसमध्ये करिव साढे ५ सय मिटर सडक क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवतजावत बढी हुने गर्छ । वन्यजन्तुको आवागमन बढी हुने क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज बन्ने भएको हो । खाता करिडोर क्षेत्र वन्यजन्तुका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । खाता करिडोरले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रलाई जोडने गर्छ । खाता करिडोर भएर हात्ती, गैँडा, बाघलगाएतका संरक्षित वन्यजन्तुहरु नियमितरुपमा नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने गर्छन् ।
वन्यजन्तुको आवागमनलाई मध्यनजर गरि खाता करिडोर क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि ओभरहेड ब्रिज बन्न लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । खाता करिडोर क्षेत्र संरक्षणका दृष्टिकोणले दक्षिण एशियाकै निकै महत्वपूर्ण जैविक मार्ग मानिन्छ । खाता जैविक मार्गको महत्व र संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा यो क्षेत्रसँग जोडिएका वन क्षेत्रलाई खाता संरक्षित वन घोाषण गरेको छ ।
नेपालमा वन्यजन्तु ओहोरदोहरका लागि अन्डरपास ब्रिज निमार्ण भएका छन् । तर खाता करिडोर क्षेत्रमा बन्न लागेको यो ओभरहेड ब्रिज नेपालकै पहिलो प्रयास भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लले बताए ।
वन्यजन्तुलाई पुलको अनुभव नहुने गरि यसको संरचना तयार पारिने बताइएको छ । पुलको माथि रुख,विरुवा तथा झाडीहरु रोपिने छ । जसले गर्दा वन्यजन्तुले जंगलमै हिडेको महशुस गर्ने छन् । करिडोर क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज बनेपछि बन्यजन्तुहरु निवार्धरुपमा एक वनवाट अर्को वनमा आतजावत गर्न सक्ने छन् । भने सडक दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुको मृत्यु हुने क्रम न्यूनिकरण हुनुका साथै मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्धसमेत कम हुने संरक्षणकर्मीहरु बताउँछन् ।
वन्यजन्तु ओहरदोहर गर्ने खाता करिडोरमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निमार्ण गर्न संरक्षणकर्मीहरुले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । खाता करिडोर क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निमार्णका लागि बहुसरोकारवाला सवालमा सहजिकरण गर्दै आइरहेको संवाद समूह बर्दियाले सरोकारवाला पक्षहरुसँग विभिन्न समयमा अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको थियो ।
२ वर्ष अघि जिल्लामा भएको जैविक मार्ग संरक्षणका सवाल र दिगो समाधानका उपाय सम्वन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश नं ५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले खाता करिडोर क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बाइकमा गुड्दा गुड्दै पक्राउ परे अन्सारी
तुलसी भण्डारी - August 13, 2020 0
वीरगन्ज । सुन्धाराको ‘सुनकाण्ड’ अर्थात् स्कार्पियोबाट फालिएको झोला बरामद भएपछि फरार मुख्य योजनाकार भनिएका इल्ताफ हुसेन अन्सारी पक्राउ परेका छन् । उनलाई बारा प्रहरीको...
भदौ ४ देखी रिलायन्स लाईफको आइपिओ जारी हुने
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि.ले भदौ ४ गतेदेखी सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैंया अंकित दरका ६३ लाख कित्ता शेयरको प्रारम्भिक निष्काशन गर्ने भएको छ...
Breaking News सरिता दाहाल - August 13, 2020 0
प्रदेश ७ दीप्क ओली - August 13, 2020 0
Breaking News टेनिस रोका - August 14, 2020 0
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - August 14, 2020 0
Editor-Picks सुभाष साह - August 14, 2020 0
खेल विवेक विवश रेग्मी - February 25, 2020 0
इटहरी । धरानमाजारी २२ औँ बुढासुब्बा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकपको मंगलबार भएको अन्तिम क्वाटर फाइनल खेलमा एसएफसी कोलकाता र शहीद स्मारक...
Editor-Picks टेनिस रोका - August 1, 2020 0
कोरोना खोपको विकास र आशा
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - June 21, 2020 0
घरबाहिर निस्कदा लाग्छ, अहिले देशमा कोरोनाको महामारी छ र ! जताततै भिडभाड छ । चोकचोकमा बन्द भएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन् । सवारी जाम...
प्रदेश ३ नारायण ढुङ्गाना/रासस - May 21, 2020 0
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेश कार्यान्वय गर्न सुरक्षाकर्मी अग्रपङ्क्तिमा खटिएका छन् । सङ्क्रमको जोखिम कायमै हुँदा सुरक्षाकर्मीले...
चावहिल सडक जहिल्यै हिलाम्मे
Editor-Picks टेनिस रोका - August 13, 2020 0
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंका चक्रपथमा पर्ने चावहिल वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलोमय बन्ने गरेको छ । सडक मर्मत तथा सम्भारमा ढिलासुस्तीका कारण यात्रु...
Editor-Picks प्रशान्त वली - August 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक एक घण्टामा १४ जना नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन् । पछिल्लो एक सातालाई आधार मान्दा एक घण्टाको अवधिमा १४ जना...
टेनिस रोका - August 14, 2020
सुभाष साह - August 14, 2020
सरिता दाहाल - August 13, 2020
रमेश तिमलसिना - August 13, 2020